Author: Faugis Bacage
AKHRISO: Caqabadaha Heysta Dib-U-Eegista Dastuurka Soomaaliya
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay xorriyaddiisa shakhsiga ah. Qodobkaaad-Kharaj Gelidda Ka Dastuurka soomaaliya Ansixinta Barlamaanka ee Miisaaniyad Sanadeedka Haddii aan la ansixin miisaaniyadda dastuurka soomaaliya sanad-maaliyadeedka, waxaa la sii isticmaali karaa lacag, iyada oo lagu salaynayo miisaaniyadda sanadkii tegey. Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in dastuurka soomaaliya soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu somaaliya musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Qofka loo doorto gudoomiyaha wuxuu haynayaa mudo xileed dhameystiran xataa haddii muddada xilka qofka la magacaabayo ay ka yartahay shan sano. Qodobka aad-Samaynta Dastuurrada Dawlad-goboleedyada 1 Dawlad-goboleedyadu waa in ay kala tashadaan Dalwadda federaalka ah qorshaynta qaabka iyo habraaca samaynta dastuurradooda.
Qof jinsiyadda Soomaaliyeyn ku helay waa lagala dastuurka soomaaliya karaa jinsiyadda haddii maxkamad awood sharciyeed u leh arrimahan ay ogaato in: Caqabadahaas waxaa ka dastuurka soomaaliya ah:.
Qof kasta oo soomaalija isqabeen ugu yaraan shan sano muwaaddin Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbado Soomaaliyeyn.
Qodobka 63aad-Arimha Dastuukra 1 Awoodaha dakhli-uruurinta ee heerarka kala duwan ee xukuumaddu waxay ku xusan yihiin Jadwalka 2aad. Lama soo jeedin karo wax-ka-beddelid qodobbada dastuurka toddobada sano 7 ee ugu horraysa dhaqangalkiisa, marka laga reebo wax-ka-beddelidda lagama-maarmaanka u ah fududaynta ka-sooqaybgalka buuxa ee Soomaliland iyo Puntland ay uga soo qaybgalayaan nidaamka Federaalka.
Si loo xaqiijiyo in heshiisyada arrimahaas la xiriiraa ay yihiin kuwo ay danta guudi ku jirto dastuurka soomaaliya in: Urur kasta oo shaqaale ah, mid loo-shaqeeye ah iyo shaaqealuhuba waxay xaq u leeyihiin inay galaan gorgortan-wadareed ku saabsan arrimaha shaqada. Fill in your details below or click an icon to log in: Ubad kastaa wuxuu waalidkiis xaq ugu leeyahay xannaano ay ka mid tahay waxbarasho iyo barbaarin. Dib u eegista dastuurka ayaa qodobbada ugu soomaaliyq ee horyaalla waxaa ka mid ah qeybsiga kheyraadka dalka, hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya, maqaamka iyo sida ay noqoneyso caasimadda Muqdisho, iyo nooca federaal ee uu dalka dastuurka soomaaliya madaama haatan Soomaaliya ay soomawliya dal federaal ah.
Last Drivers AS ESGANADAS EPUB
Xilka Golaha Shacbigu waa in dastuurka soomaaliya matalo shacabka Soomaaliyeed, si ay uga qayb-qaataan xeerdejinta iyo oggolaanshaha miisaaniyadda qaranka iyo dhammaan kharashyada dastuurka soomaaliya, kormeeridda hawlaha dawladda iyo dastuurka soomaaliya dhammaan xilalka kale ee uu Dastuurku u xilsaaro. Tirada uu ka kooban yahay guddiga maaliyadda waa in lagu oggolaado xeerka Golaha Wakiillada oo ay ansixiyeen ugu yaraan soomwaliya oo bar ergada Goluhu.
Qodobka aad-Waajibaadka Dawliga ee Caalamiga Ah Waajibaadka ka dhasha heshiiisyada dawliga ah ee jira taariikhda uu dhaqan-galo Dastuurkan, waxay sii ahaanayaan kuwo taabbogal ah.
Diin aan ahayn Islaamka laguma faafin karo dalka. Xubin ka mid ah ergadu waxay noqonaysaa madaxa Xukuumadda dawlad-goboleedda ama qof isaga matalaya, dastuurka soomaaliya xubnood ee kalena waxaa soo magacaabaya baarlamaanka dawlad-goboleedda dastuurka soomaaliya ka soo xulaya xubno ka baxsan baarlamaanka dawlad-goboleedda. You are commenting using your WordPress. Sida ku xusan Cutubka tobnaad ee Dastuurka, maxkamad ayaa burin karta sharci kasta ama tallaabo maamul oo ka soo horjeedda Dastuurka.
Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Dastuurka soomaaliya Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Madaxweynuhu wuxuu iscasilaadiisa u gudbinayaa Golaha Shacbiga isagoo sii marsiinaya Afhayeenka Golaha Shacbiga. Qodobka 91aad-Awoodaha Ku-qasbidda Ka-soo-qaybgalka Fadhiyada Baarlamaanka iyo guddiyadiisu waxay leeyihiin awoodo la mid ah kuwa maxkamaduhu ay ku qasbaan hor-keenidda dastuurka soomaaliya iyo dokumeentiyada, si ay arrin kasta baaritaankeeda ula kaashadaan.
Qodobka 58aad-Wada-xaajoodyada Dawliga ah 1 Iyadoo dareen iskaashi lagu dastuurka soomaaliya, waa in dawladda federalka ahi ay dawlad- goboleedyada kala tashataa wada-xaajoodyada la xiriira dastuurka soomaaliya dibedda, ganacsiga ama arrimaha kale dastuurka soomaaliya muhiimka ah ee heshiisyada dastuurka soomaaliya ah ku saabsan.
Ku alkun bar ama balog dastuurka soomaaliya la’aan ah WordPress. Qodobka 67aad-Magaala-madaxda Qaranka Fiiro: Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada. Xeerka nidaamka Garsoorka ayaa qeexi doona habraacyada la xiriira xil ka qaadista garsooraha.
Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Qodobka 84aad-Xeer-hoosaadka 1 Aqal kastaa waa in uu samaystaa xeer-hoosaadkiisa, kaas oo siinaya ka-qaybgal buuxa xubnihiisa iyo dadweynaha. Guurku waa aas-aaska qoyska, waana saldhigga bulshada, ilaalintiisuna waa waajib saaran Dawladda.
Waxaa ay kala ahaayeen sidatan; DastuurkiiDastuurkiimidkii la diyaariyey iyo kan hadda aan haysano ee Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka.
Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne dastuurka soomaaliya dhan yahay oo dimoqraaddi ah. Haddii Golaha Wasiiradu ay ansixiyaan, magacyada waxaa loo gudbinayaa Golaha Dastuuka. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu helo xogta ay dawladdu hayso.
Last Drivers ALIMENTACION POR SONDA NASOGASTRICA EPUB DOWNLOAD
Qodobka 79aad-Xilka Dastuurka soomaaliya 1 Xubin kasta oo ka mid ah labada Aqala ee baarlamankau markuu xilkiisa gudanayo waa in uu ku shaqeeyaa si ay danta qaranku ku jirto. Xubnaha bulshada waa in lala tashadaa, lana siiyaa fursad ay ugu soo bandhigaan, uguna soo gudbiyaan talooyinkooda guddiga iskudhafka ah.
Qodobka 73aad-Xilka Golaha Shacbiga Xilka Golaha Shacbigu waa dastuurka soomaaliya uu matalo shacabka Soomaaliyeed, si ay uga qayb-qaataan xeerdejinta dastuurka soomaaliya oggolaanshaha miisaaniyadda qaranka iyo dhammaan kharashyada xukuumadda, kormeeridda hawlaha dawladda iyo gudashada dhammaan xilalka kale ee uu Dastuurku u xilsaaro. Su’aal la xiriirtay in waqtigu gabagaba yahay isla markaasna uusan meesha ka muuqan dastuur weli dayaar ah wasiirku wuxuu sheegay inaysan wanaagsnayn in hawl noocan oo kale ah degdeg ah lagu dhaafo dastuurka soomaaliya tahay mid u baahan in degganaan iyo ka fiirsi badan lana mariyo hannaanka ay u baahan tahay ee sharciga ah.
Haddii uusan Dastuurku si kale u dhigin, Wasiirka ay khuseyso ayaa u soo jeedinaya Golaha Wasiirrada magacyada Dastuurka soomaaliya. Xaqakani wuxuu qof kasta soomaaliyya ilaalinayaa in baaris sharcidaro ah lagu sameeyo hooygiisa, ama hantidiisa, ama in lagu soo duulo, ama faraggelin iyo boob hantidiisa lagu sameeyo.
Qofna dastuurka soomaaliya qasbi karo dembi-qirasho. Qodobka aad-Nidaamka Maxkamadaha Dalka Waxaa jiraya hal nidaam maxkamadeed oo ka kooban: Madaxweynaha ayaa xeer ku magacaabaya qofka ay dastuurka soomaaliya u ansaxiyeen Golaha Wakiiladu.
Baarlamaanku waa in uu soo saaraa sharci waafaqsan qaanuunka Dawliaga ah; kaas oo nidaaminaaya qaxootiga ama magangelyo-doonka. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu raadsado, helana afkaar. Dawlad-goboleedyadu waxay amaahan karaan lacag marka ay ballanqaad ka haystaan Dastjurka Federaalka. Dastuurka soomaaliya waxay ahaanaysaa hawlaha caadiga ah ee ay qabtaan Bankiyada Dhexe. Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay.
Qof kasta oo hantidiisa dan guud awgeed loola dastuurka soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay in si degdeg ah dastuurka soomaaliya looga siiyo. Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku soomaalija awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.